Faragelinta shisheeye ee Soomaaliya oo walaac laga muujiyay
Moussa Faki Mahamat, Gudoomiyaha Ururka Midowga Africa [Sawirka: Reuters}
ADDIS ABABA - Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ayaa walaac xooggan ka muujiyay faragelinta dalalka aan Afrikaanka ahayn ay ku hayaan arrimaha dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa sheegay in fara-gelinta shisheeyaha khatar ku tahay dedaalada nabada loogu soo dabaalayo Soomaaliya, oo mudo ku dhaw 30 sano ay colaado ka socdaan.
Isagoo aan carabka ku dhufan dalalka ay yihiin kuwa ka baxsan Africa ee faragelinta ku haya Soomaaliya, ayuu Muuse Faki ugu baaqay dhamaan wadamada shisheeye inay iska ilaaliyaan wax walba oo dhaawacaya horumarka sida dhibka badan ay ku gaartey Soomaaliya.
Wuxuu dhanka kale u mahadceliyay AMISOM, oo uu ku amaaney doorkooda naf-hurnimada leh ee dalka Soomaaliya, halkaasi oo mudo 10 sano ah kula dagaalamayaan Al-Shabaab oo ah kooxda oo khatarta amni ku haysa gobolka Geeska Africa.
Sidoo kale, Safiirada Midogw Yurub u fadhiya dalalka Geeska Africa ayaa qabo walaac kan lamid ah, oo ah ka muujiyeen saameynta Khilaafka dalalka Khaliijka ee Soomaaliya, oo ah dal dowladda ka jirta ay yahay mid taag-darran.
Alexander Rondos, oo ah Ergayga Midowga Yurub u qaabilsan gobolka ayaa sheegay in saameyn toos ah ay Xiisadda Khaliijka ku yeelatay Geeska Africa, halkaasi oo horey uga jireen dhibaatooyin kale oo amni la'aan iyo bini'aadanimo, gaar ahaan Soomaaliya.
Hadalkaan kasoo yeeray labadaan masuul ayaa imaanayaa iyadoo Soomaaliya ay ku loolamayaan dalalka Khaliijka kadib khilaafkii soo kala dhex-galay June 5, 2017, iyadoo xukuumada Muqdisho lagu eedeyay inay dhinac la safatay.
Wafdiga Midowga Yurub ee Farmaajo kulanka la qaatay, waxaa hoggaaminayey...
Farmaajo oo Addis Ababa kula kulmay Antonio Gutters
Soomaliya 28.01.2018. 15:06
Madaxweynaha Somalia oo baaq culus ka jeediyay Shirka madaxda Africa [Sawirro]
War Saxaafaded 10.02.2019. 22:31
Farmaajo oo ka qeybgalaya Shir madaxeedka Midowga Africa [Sawirro]
War Saxaafaded 09.02.2019. 20:38
Farmaajo oo ka baaqday Shir madaxeedka Midowga Africa
Soomaliya 17.11.2018. 10:27